Ukusetshenziswa Kwemithetho Yangaphandle Nezinqumo Zezingxabano e-UAE. Okudingayo ukwazi. 0000
Ukusetshenziswa Kwemithetho Yangaphandle Nezinqumo Zezingxabano e-UAE. Okudingayo ukwazi.
1 Comment	/ ummeli, Blog, I-Business Law, amacala enkantolo, Uhulumeni / By Sarah
Ingxoxo emfushane ngokusetshenziswa kweMithetho Yezangaphandle kanye Isixazululo Sengxabano ezinkantolo ze-United Arab Emirates
Imithetho ehlukile yakwamanye amazwe isebenza kwezinye izinkampani ezisebenza ezifundeni ezahlukahlukene ze-United Arab Emirates (UAE). Uma ungumsebenzi noma ibhizinisi, kuzodingeka ukuthi uthobele umthetho olawula imisebenzi yakho yebhizinisi. Isibonelo, uma uqhuba inkampani yezokuthutha futhi wehluleka ukukhokhela abasebenzi bakho ngesikhathi, ungabekwa icala lokweba amaholo. Umbuzo manje uthi, yimiphi imithetho yangaphandle esebenza ku-UAE?
I-United Arab Emirates (i-UAE) ihlangabezane neminyaka eminingi yentuthuko yezomnotho futhi isikhuphuke njengesikhungo esikhulu samabhizinisi esifundazweni, idonsa ukuhwebelana okukhulu nokuhlukahlukene. Inqubekela phambili yezomnotho iholele ongoti bezezimali kanye namaqembu kwizivumelwano e-UAE ukuthi bavame ukukhetha umthetho wakwamanye amazwe, ikakhulukazi umthetho waseNgilandi, ukumela ubudlelwano obunegunya futhi bakhethe indawo yangaphandle noma ukulamula njengenketho ehlukile enkantolo.
Ngaphezu kwalokho, ukubheka uhlelo lwezomthetho lwe-UAE, indawo ejwayelekile yomthetho enobukhona obuqinile bezindawo zamahhala zezomnotho eziboniswe kumthetho osuselwe ngokwesiko kubaluleke kakhulu, futhi sanelisekile ukunikela ngencwadi eyisisekelo kodwa ephelele siza ngokuqonda amaphuzu avelele esibucayi ngesinqumo somthetho, ukubanga amacala nokulamula e-UAE.
Ikhwalifikheshini efaneleke ngokugqamile kufanele idwetshwe phakathi kwezingxenye zesinqumo somthetho wangaphandle, kuxazululwe futhi kubekwe amacala. Ngezansi kunezici okufanele uzicabangele:
Okokuqala, Insimu ye-UAE
Iphethwe yimithetho yezinga likahulumeni kanye ne-Emirate futhi inezinkantolo ezahlukahlukene eziseduze, okubhekiselwa kuzo njengezinkantolo ze-UAE.
Okwesibili, izindawo zamahhala zomnotho, ikakhulukazi, iDaily International Financial Center (I-DIFC) -
Indawo yamahhala kwezomnotho e-Emirate yaseDubai eyakha isigceme esanele ngaphakathi kwe-UAE, ekhonjiswe kumthetho osuselwe enkambisweni, isebenzisa ukuhlelwa kwayo kwemithetho ejwayelekile neyamabhizinisi kanye nezilawuli nalapho inkantolo ezimele imisa khona i-Dubai International Financial Center Izinkantolo.
Ngabe izinkantolo ze-UAE ziyasigcina isinqumo esenziwe amaqembu esivumelwaneni sokusebenzisa umthetho wezangaphandle?
Ezingeni eliyisisekelo, ukukhetha umthetho ongamele owangaphandle kuvumelekile. Kodwa-ke, izinkantolo ze-UAE zizosigcina lesi sinqumo kuze kube sezingeni lokuthi izinhlinzeko zomthetho wamazwe angaphandle azilahli iSharia'a lamaSulumane, isicelo esivulekile noma izimiso zokuziphatha ze-UAE, futhi ubudlelwano abujikelezi ngezinkinga ezahlukahlukene zokucelwa okuvulekile njengokucelwa kwamalungelo, ukusebenza, ukungena ehhovisi lebhizinisi, kanye nezinkontileka eziqediwe ngezinto zikahulumeni we-UAE.
Ngaphezu kwalokho, isicelo esivulekile sokuhlala esenziwe ngumhlali, njengoba sihunyushiwe e-UAE, sinabile futhi sifaka, ngaphezu kwezinye izinto, izindaba zezikhundla zomuntu ngamunye, ithuba lokushintshana, ukusabalalisa ingcebo, namazinga wobunikazi bomuntu ngamunye, ukuze izinga lokuthi lezi zinkinga aziphikisi amalungiselelo ayisisekelo namazinga ayisisekelo e-Islamic Shari'a. Ngokuhamba kwesikhathi, yize imithetho yakwamanye amazwe ingavunyelwa, empeleni, ochwepheshe bezomthetho basabhekana nobunzima ekusebenziseni imithetho yezangaphandle njengoba bekufanele baqinisekise ukuthi kukhona nokuqukethwe ngumthetho wezangaphandle enkantolo njengokuyiqiniso.
What ngabe izingozi ezihlobene nesinqumo somthetho wangaphandle sokumela isivumelwano endaweni ye-UAE?
Okokuqala, iqembu elibiza umthetho wezangaphandle linomthwalo wobufakazi bokuba khona kanye nomongo walowo mthetho wezangaphandle.
Iqembu elibiza umthetho wezangaphandle linomthwalo wobufakazi bokuba khona kanye nomongo walowo mthetho wezangaphandle ezinkantolo ze-UAE. Ake sithi iqembu elisebenzisa umthetho wezangaphandle lehluleka ukukhombisa ukusetshenziswa kwalowo mthetho ongaphandle., Inkantolo, lapho ibibheke kahle, kungenzeka isebenzise umthetho we-UAE ngaphandle kokuqonda.
Okwesibili, imithetho ye-UAE izosebenza, noma ngabe hhayi umthetho wezangaphandle okhethiwe.
Noma kunjalo Isigaba 257 se-UAE Civil Code ayikwenqabeli imithetho yakwamanye amazwe ngezivumelwano, izinkantolo ze-UAE zinqume ukuthi imithetho ye-UAE izosebenza nokho. Isinqumo besisuselwa ekuboneni ukuthi amaqembu kungenzeka ukuthi akudebeselele ukubonisa isiqinisekiso esikhangayo nesibalulekile sobukhona bomthetho wamazwe angaphandle noma enganakiwe ukunquma izinto zawo. Kulezi zibonelo, izinkantolo ze-UAE ziyakushaya indiva ukuqinisekiswa kwamaqembu futhi zihlole izinzuzo zecala ngokwemithetho ye-UAE.
Okwesithathu, izimfanelo eziningi zomthetho wezangaphandle.
Ngokweqiniso, izimfanelo ezinamacala amaningi zomthetho wangaphandle aziveli uma impikiswano inconywa ekulamuleni, njengoba inkantolo ye-UAE ithatha ithuba lokugunyaza udumo e-UAE. Ngeke ihlole izinzuzo zecala. Izosebenzisa iSivumelwano Sokwamukelwa kanye Nokuphoqelelwa Kwemiklomelo Yama-Arbitral Angaphandle ekubonakaleni komhlaba wonke noma inqubo yokuqalisa ukusebenza ehlelelwe ukuma kokulamula kwasekhaya okunconywe ngaphansi komthetho I-Code ye-Procedures Yomphakathi ye-UAE.
Okwesine, Akunasifo esivikela isikweletu
Ukuthatha isinqumo sokusebenzisa umthetho wangaphandle esivumelwaneni akusivikeli isivumelwano ekubeni nesibopho semibono ethile ebalulekile yemithetho ye-UAE, umcabango obanzi wesicelo esivulekile. Inkantolo ye-UAE ingaqhubeka nalo mcabango uma inkinga ingaphambi kwayo. Ngaphezu kwalokho, inkantolo ingasithatha isicelo, uma kuyinkantolo efanelekile ukuqhuba impikiswano noma uma inkantolo ekwaziyo incike ekugunyazweni kwesinqumo sangaphandle noma inhlonipho yokulamula. Kodwa-ke, iNkantolo ye-DIFC ibona umthetho wakwelinye izwe futhi kufanele iwusebenzise engxabanweni yamanje ezingeni eliyisisekelo.
I-Article 257 ye-UAE Civil Code ayiyenqabeli imithetho yakwamanye amazwe kepha imithetho ye-UAE izosebenza.
Kuyini Ukuxazululwa Kwempikiswano?
Ukuxazululwa Kwempikiswano Ehlukile kuyindlela ehlukile yokuxazulula izingxabano ngaphandle kokuqulwa kwamacala ngokulamula noma ngokulamula.
Yiziphi ukuzimisela kokuphikisana amaforamu amaqembu angavuma ngokusemthethweni ku-UAE?
Izinkantolo zasekhaya -
Izinqubo zayo, ikakhulu, beziqukethe amazinga amathathu okokuqala, ibhidi, ne-cassation. Izinqubo zenkantolo zihlala ziyisidina.
Izinkantolo ze-DIFC eziphethe inhlangano ezimele
Isidingo sokulingana enkantolo ye-DIFC sinamazinga amabili nje; isibonelo sokuqala nenkantolo yokunikezwa, okudala izinqubo zenkantolo ngokulingene ngokulingene kunezinkantolo ze-UAE noma Dubai Courts.
I-DIFC inelungiselelo layo elithile lomthetho wezohwebo nomthetho womphakathi.
Ukulamula kuyisithangami esivamile esingeyona senkantolo sokuxazulula izingxabano lapho amaqembu amabili ehlala phambi komlamuli noma ijaji elingathathi hlangothi. Izinqubo zokulamula zisetshenziswa kakhulu emakhaya noma emhlabeni wonke, esikhungweni noma ngokungenzi lutho, ngaphandle kwezinkinga ezithathwa njengemvelo yesicelo esivulekile njengoba kubekiwe kule ndawo engenhla.
Yimaphi amaqembu ahlala ekhetha izinkundla zokulamula e-UAE?
Ukulamula kungenye indlela yokuxazulula izingxabano (i-ADR) njengoba ithole intuthuko enkulu e-UAE. I-UAE ibilokhu iyenza ibe ngeyesimanje indlela yayo yokungenelela ukuhlangabezana nezinyathelo zomhlaba wonke kanye nemikhuba emihle.
I-Dubai International Arbitration Center (i-DIAC) yizikhungo ezibonakalayo e-UAE futhi bezilokhu zisebenza kahle, ikakhulukazi imihlahlandlela yayo ekhonjiswe kwimithetho ye-ICC. I-DIFC-LCIA ukugxila kokungenelela okusungulwe kubambiswano olubucayi phakathi kwe-DIFC neNkantolo Yezokulamula Yomhlaba Wonke yaseLondon.
1 icabange "Ukusetshenziswa Kwemithetho Yangaphandle kanye Nezinqumo Zezingxabano e-UAE. Okumele ukwazi. ”
Pingback: Ukubaluleka Kweseluleko Sezomthetho Kuzinkontileka Zebhizinisi eDubai, e-UAE 00000 | Izinkampani Zomthetho eDubai